Google no mety ho bankinao manaraka | Androidsis
Google na Amazon dia mety ho akaiky ny fizahana ny sehatry ny banky tsy miankina. Araka izany, i Francisco González, filohan'ny Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dia nanambara izany vao tsy ela akory izay tao amin'ny kaongresy iray tao Madrid. Ny filazana fa fotoana fohy talohan'ny nahatongavan'ireto goavambe ireto ho mpifaninana amin'ny banky eran-tany.
Ny haben'ireto orinasa roa ireto dia tsy ho ara-dalàna ny mieritreritra fanasamihafa ny asany. Ary rehefa mitovy ny haben'ny orinasa iray dia mahazatra ny mizaha faritra hafa amin'ny orinasa. Fa ho afaka hifaninana amin'ireo banky manan-danja toy izany ve i Google?
Google dia mety ho banky atokisanao amin'ny ho avy
Indraindray izahay dia niresaka taminao momba ny mety hisian'ny goavam-be teknolojia toy ny Google na Apple dia afaka mamorona oniversite misy azy ireo. Zavatra misy saina be. Tamin'ity fomba ity no nahafahan'izy ireo nampiofana ny mpiasan'izy ireo saika avy hatrany. Ary "mamolavola" ny talentan'ny mpiasan'ny ho avy mifanaraka indrindra.
Fa ny miresaka momba ny teknolojia sy ny banky dia tsy mitovy amin'ny miresaka momba ny teknolojia sy ny fanabeazana. Na dia zava-misy izany Ny orinasam-pandraharahana manerantany dia mahita an'ireto goavambe teknolojia ireto ho fandrahonana lehibe. Azo antoka fa tsy hahita eto an-tanànantsika isika, farafaharatsiny ao anatin'ny fotoana fohy, sampan'ny Google Bank, marina ?.
Manakaiky ny teknolojia ny banky. Ireo pejin-tranonkala, ny fampiharana azy ho an'ny finday avo lenta, ary ny fitsaboana ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa azy. Ny zava-drehetra dia toa hifarana amin'ny fifandraisana amin'ny sehatra manerantany. Amazon, ohatra, dia arahin'ireo orinasa manerantany ho modely ara-barotra mahomby.
Azonao an-tsaina ve ny manasonia findramam-bola arahin'antoka amin'ny tranonao miaraka amin'i Google? Mety mifototra amin'ny karoka mahazatra anay ny fanomezana ny vokatra fampiasam-bola? Orinasa banky miaro, tsy toy ny teknolojia lehibe afaka manome antoka bebe kokoa momba ny fiainana manokana sy filaminana. Ary ambonin'izany rehetra izany traikefa amin'ny sehatry ny sarotra amin'ny famerana ara-bola.
Amin'ny lafiny ratsy, Google na Amazon dia mety tsy ho mora tohina ary ho vonona kokoa amin'ny fiarovana amin'ny cyber alohan'ny fanafihana. Hatreto, isika izay mpankafy teknolojia dia aleony tsy mifangaro amin'ny iray hafa. Tsara kokoa noho Google dia mifantoka amin'ny fanomezana antsika milina fikarohana tsara. Smartphone tsara kokoa sy fanatsarana ny rafitra fiasan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google no mety ho bankinao manaraka